SIN CITY မှ SUN CITY သို့ EL PASO နှင့် ပတ်သက်၍ ချစ်စရာများစွာရှိသည် - နှုန်းထားများ
Sin City မှနေစီးတီးအထိ El Paso နှင့် ပတ်သက်၍ ချစ်ရန်များစွာရှိသည်
တက္ကဆက်ပြည်နယ် El Paso အား Sun City ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတစ်လျှောက်လုံးတရားမ ၀ င်မှုကြောင့်သေနတ်သမားခြောက်ယောက်၏မြို့တော်အဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးအမေရိကရှိအဆိုးဝါးဆုံးအမျိုးသားများရှိခြင်းကြောင့်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ထိုတွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပြီးအခြားအယ်လ် Pasoans သည်အရေးအကြီးဆုံးမှာအယ်လ်ပိုဆိုသည်မက္ကဆီကိုကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသဘောတူလိမ့်မည်
များစွာသောဒေသခံများသည် El Paso ထက်အခြားမည်သည့်နေရာမှမဆိုထွက်ပြေးရန်တစ်နေ့အိပ်မက်မက်နေစဉ်၊ အမှန်တကယ်တွင်ဆီးနှင်းများကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ရုံသာမကလည်ချောင်းနာနေခြင်းမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏မြို့တော်ကိုချစ်ရန်များစွာရှိသည်။
ဘယ်မှာ rupaul ရဲ့ဆွဲပြိုင်ပွဲရိုက်ကူးသည်
El Paso သည် Tex-Mex ၏အကောင်းဆုံးသောအရောအနှောဖြစ်သည်
သင်ဟာဒေသခံတစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေသူကြွယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုတန်ဖိုးမထားဖို့ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောတက္ကဆက်ယဉ်ကျေးမှုကိုပေါင်းစပ်။ လူတိုင်းသည်တဂါလံ ဦး ထုပ်များနှင့် Cowboy ဘွတ်ဖိနပ်များနှင့်မက္ကဆီကန် hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှောင်ပြောင်သည်။
သငျသညျ Chico ရဲ့ Tacos မှာစားတော့မဟုတ်လျှင်သင်တစ် ဦး El Pasoan မခေါ်နိုင်ပါ
ငါဝန်ခံပါလိမ့်မယ်, စားသောက်ဆိုင်သူ့ဟာသူညအချိန်တွင်တော်တော်လေးရိပ်ရတဲ့။ သင်လမ်းလျှောက်ပြီး၎င်းသည်သေနတ်သမားရှေ့တွင်ရုပ်ရှင်ရှေ့မှမြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ရဲနောက်ကျောထောင့်တွင်ထိုင်နေသောအဝါရောင်နှင့်မီးချောင်းအလင်းများသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကြည့်သည့်ညစာစားပွဲကိုမီးထွန်းပေးသည်။ ကြည့်ရှုခြင်းကိုအရူးလုပ်ခွင့်မပြုပါနှင့်။ သူတို့ရဲ့တာတိုများသည်စားနပ်ရိက္ခာကွန်ယက်၏အစဉ်အမြဲငါအကောင်းဆုံးအရာအပါအ ၀ င်ရုပ်မြင်သံကြားပြသမှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ငါတို့အစားအစာ, မုန်, အချိုပွဲများနှင့်အထူးသဖြင့်ငါတို့သကြားလုံးထဲမှာချီလီထားတော်မူ၏။ ကျနော်တို့ပတ်ပတ်လည်ရှုပ်ထွေးကြပါဘူး။ အိုးနှင့်ထုံးကိုမမေ့မလြော့ပါ။
ကျနော်တို့မူလ '' Sin City ''
1800 တစ်လျှောက်လုံး, အယ်လ် Paso ရဲ့လမ်းများလောင်းကစားရုံခန်းမ, အလှပြင်ဆိုင်နှင့်ပြည့်တန်ဆာနှင့်အတူစီတန်းခဲ့ကြသည် (oh, ငါ့!) ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး 1905 သည်အထိမတရားမှုကိုနှင့်ပတ်သက်။ အများကြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုကနေထိုင်ရန်တိုင်းပြည်အတွင်းအလုံခြုံဆုံးမြို့များ၏တ ဦး တည်းထည့်သွင်းစဉ်းစား။
သင်ဖြစ်ကောင်း Pancho ဗီလာရဲ့ ဦး ခေါင်းအကြောင်းကိုငါသိ၏
Pancho Villa သည်ကျော်ကြားသောမက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်နှင့်မက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေး၏အရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူကမျိုး၏မြောက်ပိုင်းမက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏ရော်ဘင်ဟဒ်နှင့်တူ၏။ သူလည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်လှည့်စားဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒီလောက်လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့သူသေသွားတဲ့အခါတစ်ယောက်ယောက်ကသူ့သင်္ချိုင်းကိုမက္ကဆီကို၊ ချီဟွာဟွာမှာစီးနင်းပြီး ဦး ခေါင်းခွံကိုခိုးယူပြီးသူ့ ဦး နှောက်ကိုလေ့လာဖို့တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်ရှိအယ်လ်ပါဆို (UTEP) သို့ပြန်ပို့လိုက်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ဒါသူတို့ပြောကြသည်။
ငါ ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာ Indiana ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးကို El Paso မှာ Chico's Tacos မှာအခြားဟစ်စပန်းနစ်တွေနဲ့အတူစားခဲ့တယ်။ ငါပြောင်းရွှေ့သည်အထိငါသာအဖြူကလူသုံးယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြောတာကဘေးကင်းလုံခြုံထင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဖြူတွေကအဲဒီမှာလူနည်းစုပဲ။ * ရှူရှိုက်မိခြင်း * လက်ရှိဟစ်စပန်းနစ်လူ ဦး ရေသည် ၈၂.၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
ကျနော်တို့ '' gringo '' ဟူသောဝေါဟာရကိုနှင့်အတူတက်လာ၏
အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ အယ်လ်ပါစိုသည်ဟစ်စပန်းနစ်လူမျိုးများနှင့်ဆက်လက်နေထိုင်လျှက်ရှိသည်။ မက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေးကာလတဝိုက်တွင်ထိုဒေသကိုကင်းလှည့်နေသောအမေရိကန်စစ်သားအများအပြားရှိခဲ့ပြီးဒေသခံအများစုသည်အင်္ဂလိပ်စာကိုမသိရှိကြပါ။ စစ်သားများ၏ယူနီဖောင်းများသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သောကြောင့် Pancho Villa သည်အစိမ်းရောင်အော်။ သွားသည်။ အချိန်မရွေးစစ်သားများအနီးအနားရှိခဲ့ကြသည်။ Gringo ကိုယခုအခါဘန်းစကားအဖြစ်အသုံးများပြီးဟစ်စပန်းနစ်မဟုတ်သောသို့မဟုတ်လက်တင်မဟုတ်သူများကိုရည်ညွှန်းသည်။
ရည်းစားက porn ကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေလား
လူ ဦး ရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်ဟစ်စပန်းနစ်စ်များဖြစ်နေသောကြောင့်သင်သည်အယ်လ်ပိုဆိုတွင်တိုးတက်ရန်အင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုရန်မလိုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာအစားအစာမှာယူမယ်၊ ဒေသခံတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်မယ်၊ Spanglish မှာမင်းသူငယ်ချင်းတွေပြောတာကိုနားလည်ချင်ရင်စပိန်ဘာသာစကားပြောတာကပိုအရေးကြီးတယ်။
မက္ကစီကိုသို့ ဦး တည်ခြင်းသည်တကယ့်တစ်ရက်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ Juarez, မက္ကဆီကို (J-city ဟုလည်းလူသိများ) သည်အယ်လ်ပိုဆိုနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ လူအများစုကမိသားစုဆီကိုသွားကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ခြားနိုင်ငံမှာတစ်နေကုန်နေရတာဟာပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်။
J-town နှင့် El Paso တို့သည်တူညီသောတောင်ပေါ်ဒေသများရှိသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ Juarez တွင်နေထိုင်သူများသည်ဆင်းရဲခြင်းတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်တောင်တန်းများတွင်နေထိုင်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်၏အိမ်သည်တောင်များ၌ရှိနေပါက El Paso တွင်အလွန်ကောင်းသောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, အမြင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက်လိုမြို့ကြီးပြကြီးတွေကသူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုဝါကြွားကြတယ်။ သို့သော်အယ်လ် Paso ရဲ့ပန်းခြံစာသားတစ်တောင်ဖြစ်၏။ ငါသည်လည်း၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကြီးမားဆုံးသောလူလုပ်ကြယ်ပွင့်ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သလား။ နယူးယောက်ကိုယူပါ။
အယ်လ်ပိုဆိုသည် TotalBeauty.com မှတိုင်းပြည်အတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးသောယောက်ျားများနှင့်အတူမြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ နှစ်ကြိမ်
တက္ကဆက်ပြည်နယ် (El Paso) တွင်နေထိုင်သောကျွန်ုပ်၏အမှုထမ်းများအားလုံးကြားမှကျွန်ုပ်သည် casa ကိုမခေါ်လိုသည့်အခြားနေရာမရှိပါ။ ဒါဟာဟစ်စပန်းနစ်, ကောင်းဘွိုင်များနှင့်အမေရိကရှိအဆိုးဝါးဆုံးသောယောက်ျားများသည်တကယ့်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်တာကို့စ်များအတွက်အတူတကွလာနေသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။